Samsung Gear Sport ayaa horay loogu iibiyay dalka Spain | Androidsis
In kastoo Xiaomi iyo Apple waa hogaamiyaasha suuqa, Samsung sidoo kale waa mid kamid ah shirkadaha ugu caansan suuqa wearables. Shirkadaha caalamiga ah ee Kuuriya waxay suuqa ka bilaabeen dhowr saacadood oo isboorti ah illaa iyo hadda. Hadda smartwatch-kaaga ugu dambeeyay, ee Samsung Gear Sport, sidoo kale wuxuu gaaraa suuqa Isbaanishka.
Waa wax ku saabsan daawashada cayaaraha badan ee shirkadda Ilaa hadda. Labadaba qaabeyntiisa iyo qeexitaankeeda. Waxaa loo arkaa a isbedelka Gear Sport S3. In kasta oo ay soo bandhigayso horumarin taxane ah oo dad badani u arkaan inay tahay mid ka mid ah saacadaha ugu wanaagsan ee isboorti ee la sii daayay sannadkan. Waxbadan ayaan idinkugu sheegi doonnaa hoosta!
Marka hore waa inaad muuji naqshadda weyn ee ay leedahay Samsung Gear Sport. Tan iyo markii aan shaki ku jirin waa shaqo weyn oo shirkaddu ku qabatay dareenkaas. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa iswaafajin buuxda oo casriyeysan. Waxa kale oo la jaan qaada iPhone, inkasta oo xaaladdan laga yaabo in shaqooyinka qaarkood aysan firfircooneyn. Laakiin, guud ahaan sidoo kale waa suurtogal in lagu isticmaalo taleefanka Apple.
Waxaan hoos kaaga tagaynaa adiga faahfaahinta buuxda ee tan Samsung Gear Sport:
Screen: 1.2-inch wareegsan SuperAMOLED oo leh 360 × 360 qaraarka (302ppi)
Ka ilaalinta shaashadaCorning Gorilla Glass 3 oo leh MIL-STD-5 darajada milatariga 810 caabuqa ATM
Gacaliye: 1 GHz laba-xuddun
Xasuusta gudaha: 4 GB
Xuduudaha kala duwan: Bluetooth 4.1, Wi-Fi b / g / n, NFC iyo GPS / GLONASS / Beidou
Batariga: 300 mAh (lacag la'aan wireless)
Cabbirka: 42,9 x 44.6 x 11.6 mm
Peso: 50 garaam (jijin la'aan)
Sensors: Accelerometer, gyroscope, barometer, garaaca wadnaha iyo ileyska iftiinka
U hoggaansanaanta: Samsung Galaxy oo leh Android 4.3 ama ka sareeya, aaladaha Android oo wata Android 4.4 ama ka sareeya iyo iPhone 5, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus oo wata iOS 9.0 ama ka sareeya.
Midabada: Madow iyo buluug bir ah
Sidaa darteed, waxaan arki karnaa inay tahay a daawashada ku habboon si aan ula socono dhaqdhaqaaqyadeena isboorti. Samsung Gear Sport wuxuu si toos ah u xakameyn karaa jimicsiga adoo ogaanaya talaabooyinka, orodka ama markaad baaskiil wado. Intaas waxaa sii dheer, waxay si joogto ah ula socotaa garaaca wadnaha waxayna duubi kartaa booska iyo garaaca wadnaha inta lagu jiro jimicsiga.
Shaki la'aan, xulasho aad u dhameystiran suuqa daawashada cayaaraha. Samsung Gear Sport hadda waxaa laga heli karaa suuqa Isbaanishka. Waxaa laga heli karaa dukaanka rasmiga ah ee Samsung qiimo ah 353 euros. Sideed u aragtaa daawashada cayaarahaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Saacadda Samsung Gear Sport ayaa hadda laga heli karaa Spain
5G wuxuu imaan doonaa Spain laga bilaabo Janaayo